Fihetsiketseham-panafody 3 trosa manan-danja amin'ny ady amin'ny spam
Email dia iray amin'ireo fomba tsotra sy mahomby indrindra handefasana hafatra. Ny mailaka dia lasa fomba fanao azo itokisana izay azon'ny orinasa maro atao amin'ny alàlan'ny fanamafisana asa maro toy ny fanamarinana ny fisoratana anarana sy ny famandrihana. Ny automatisation sy ny fanamarihana samihafa dia mety hahatratra ny mpampiasa avy hatrany amin'ny alalan'ny mailaka.
Indrisy, ireo jiolahy cyber dia manana safidy amin'ny fampiasana spam hanatanterahana ny ezak'izy ireo. Ohatra, misy mailaka be dia be manakona ny mailaka maro - zipvit zv13. Ireo mailaka imailaka ireo dia misy botsaka maro izay mety hahatonga ny olona tsy hahatratra ny fara-tampony amin'ny fanentanana ara-barotra. Amin'ny tranga hafa, ireo hafatra ireo dia mirakitra fifandraisana izay mora entina mankany amin'ny pejin'ny phisher.
Ny sasany amin'ireo fomba ambaran'i Lisa Mitchell, manam-pahaizana manokana Semalt , dia afaka manampy anao hiala amin'ny hafatra momba ny spam.
1. Ataovy miafina ny mailakao.
Adiresy imailaka dia ny spammer rehetra mila manatanteraka ny adidiny. Ny fitazonana ny tsiambaratonao mailaka dia tena ilaina. Aza aseho ny mailakao amin'ny olona maro satria mety hampitombo ny fahafahana handany izany amin'ny spam. Ankoatra izany, mety ho an'ny olona iray ny mandefa hafatra amin'ny spam amin'ny mailaka rehetra ao amin'ny mailaka. Ho an'ireo olona manana tranokala, aza mampiasa ny mailaka amin'ny lahatsoratra rehetra. Ireo spammers dia manana fitaovana maoderina maro izay afaka mahita sy mampiasa adiresy mailaka atolotra ao amin'ny tranonkala iray..
2. Mampiasà sivana spam.
Ireo dia rindrambaiko izay manana ny mety hiseho sy hitazonana mailaka mailaka. Ireo rindrambaiko ireo dia manana fomba maro sy loharano maro izay mahatonga azy ireo hanavaka ny mailaky ny spam avy amin'ny mailaka azo itokisana. Ataovy azo antoka fa mampiasa spam blockers ianao avy amin'ny orinasa azo itokisana. Ny mailaka dia fomba tsara hahatonga ny spams hivezivezy. Noho izany dia mahazo fanakanana tampoka izy ireo. Google dia manana adiresy mailaka amin'ny adiresy mailaka ho an'ny spam ary afaka manisika ny sasany amin'ireo hafatra ireo. Azonao atao koa ny mamantatra ny atiny amin'ny malware sy ny trozona.
3. Aza tsindriana sary.
Ampitahao ny fahamendrehan'ny URL iray alohan'ny hikirakira azy. Ny iray amin'ireo fomba tena ilaina amin'ny fisorohana ny vokatra manimba dia ny fanakanana ny mailaka amin'ny spammer manontolo. Voalohany indrindra, ny fikikisana rohy dia mety hahatonga anao hipetraka amin'ny pejy phisher. Faharoa, ny tranonkala atolotra amin'ny mailaka mailaka dia mety ahitana tranaona, izay tena manimba ny fiarovana amin'ny ordinatera. Ny olona manao SEO na asa hafa amin'ny spams dia mampiasa fitaovana entina manara-maso azy. Ireo fitaovana ireo dia midika fa ny fanindriana na inona na inona amin'ny mailaka spam dia afaka mandefa valiny amin'izy ireo, ary manamafy fa ny adiresy mailaka dia marina ho an'ny fampiasana amin'ny tranonkala.
Maro ireo mpampiasa aterineto no latsaka amin'ny spam sy ireo fanafihana cyber hafa. Ny olona mijery Internet dia mety mahita mailaka maro avy amin'ny loharanom-baovao tsy fantatra. Ireo mailaka ireo dia mety ahitana fanentanana dokam-barotra sy asa hafa izay mitaky ny mpampiasa hamoaka asa an-tsitrapo. Ny ankamaroan'ireto mailaky mailaka ireto dia mahatonga ny mpampiasa hizaka fahabangana lehibe ary hampitombo ny fahabangan'ny tranonkala iray. Afaka misoroka olana maro momba ny spam ianao amin'ny fampiasana ireo toro lalana etsy ambony. Ankoatra izany, maro ireo fanandramana hack hafa izay azonao atao mba hisorohana ny fialana amin'ny spam.